Fahadiovana eto Iarivo :: Hatreny amin’ny fokontany ny fitsirihana ny havoretrana - ewa.mg
Fahadiovana eto Iarivo :: Hatreny amin’ny fokontany ny fitsirihana ny havoretrana
News - Fahadiovana eto Iarivo :: Hatreny amin’ny fokontany ny fitsirihana ny havoretrana
Hidina ifotony, hatreny amin’ny fokontany, amin’ny fanarahamaso ny fanajan’ny daholobe ny fahadiovana ny ekipan’ny kaominina Antananarivo renivohitra. Hampandraisina anjara ireo mpiasan’ny fokontany.
“Hojerena isak’ireo vakim-paritra mba hiantohana ny fahombiazan’ny politikan’ny fahadiovana eto an-drenivohitra. Ilàna ny fifanampian’ny rehetra izao ezaka izao fa tsy vitan’ny polisy monisipaly irery, ohatra, ny fampanajàna an’ireo fepetra mikasika ny fahadiovana”’, araka ny fanamarihan’ny dokotera Razanakombana Allyre, tale misahana ny rano sy fahadiovana ary fidiovana eo anivon’ny kaominina Antananarivo renivohitra, tamin’ny antso an-tariby, omaly.
Vita ny famolavolana an’ireo fitsipika hifehy ny fahadiovana eto Iarivo, taorian’ny fanovàna maro nentina tao anatiny. Hoampahafantarina, rahampitso, io fitsipika io. “Raha oharina tamin’ny teo aloha dia noezahina hazava kokoa ny fepetra vaovao, indrindra fa eo amin’ny fampiharana ny sazy. Mety ho tafiditra ao anatin’ izany, ohatra, ny fampiharana ireny asa ho an’ny tombontsoan’ny besinimaro ireny. Hampahafantarina miandalana eo ihany ireo fepetra ireo ary hisy ny fanentanana hatao mba tsy haha tompontrano mihono ny rehetra”, hoy indray Dr Razanakombana Allyre
L’article Fahadiovana eto Iarivo :: Hatreny amin’ny fokontany ny fitsirihana ny havoretrana est apparu en premier sur AoRaha.
Mitohy ny fahombiazana! Fandresena efatra ny eo am-pelatanan’ny CosPN taorian’ny fihaonany tamin’ny ekipan’ny Mahebourg Flippers avy any Maorisy, omaly. Lavon’ny ekipa malagasy tamin’ny isa mavesatra, 89 no ho 47, ry zareo Maorisianina.Hatreto, manana isa 9 ny CosPN ary tafiditra ao anatin’ny ekipa roa voalohany manana isa ambony indrindra, miaraka amin’ny ekipan’ny Premium Cobras avy any Seychelles. Ity farany izay nandavo ny CosPN tamin’ny isa 67 no ho 66 nandritra ny lalao mandroso nifanandrinan’ny roa tonta ary mbola ekipa hiandry ny Malagasy ihany koa ho amin’ity anio ity. Lalao anio, karazana famaranana ho an’ny CosPN sy ny Cobras, ary hahafahana mamaritra ny ekipa mpandresy hiatrika ny fifaninanana “Afroligue Zone 7” amin’ny taona 2019.Mila mandresy, araka izany, ny CosPN amin’ity ady farany ity. Raha tsahivina, niady tokoa ny lalao teo aminy sy ny Cobras, ny zoma lasa teo. Nifandimby ny fampitomboana ny isa teny amin’ny solaitrabe ary hety dia hety hatrany izany. Lavon’ny ekipan’ny Seychelles tamin’ny tombon’isa 1 anefa ny ekipa malagasy tamin’ny ora farany. Na teo aza io faharesena io, mbola vonona ny hanohitra hatrany ny CosPN amin’ity lalao miverina ity ary miandrandra fandresena. Mi.RazL’article Basikety – “CCCOI”: manana isa 9 ny CosPN, hatreto a été récupéré chez Newsmada.
Taekwondo malagasy: nisokatra amin’ny iraisam-pirenena
Ao anatin’ny fanarenana tanteraka ny taranja Taekwondo malagasy, amin’izao fotoana izao, ny eo anivon’ny federasiona malagasy, izay vao nahazo filoha vaovao, ny volana aprily lasa teo. Nanambara ny filohan’ny federasiona malagasy ny taranja haiady Taekwondo fa manomboka miditra amin’ny ara-dalana ity taranja ity ary efa manao ezaka goavana ny mpitantana. Anisan’ny vaindohan-draharaha ny fisokafana amin’ny sehatra iraisam-pirenena, efa nisy ny fifampizarana traikefa nomen’ny mpampiofana manam-pahaizana vahiny, ny Maître Lee Jeong Moon, fehikibo mainty (6è Dan), natao ny 3 sy 4 mey lasa teo. Taorian’izay, isan’ireo nanatrika ny fivoriambe ny teo anivon’ny federasiona iraisam-pirenena i Madagasikara, izay natao tany Manchester ny 13 hatramin’ny 19 mey. Nisy ny mari-pankasitrahana natolotra ny filohan’ny federasiona malagasy tamin’io fotoana io, avy amin’ny filohan’ny federasiona iraisam-pirenena, Dr. Choe.Ankoatra izay, nanamafy ny filohan’ny federasiona, Ramanantsoa Christian fa manana ny lalàna mifehy azy ny taranja Taekwondo ka tsy maintsy hampiharina manomboka izao. Hanatsara sy hanitsy ny tsy nety teo aloha, ny mpitantana ankehitriny, hoy hatrany ny fanazavany. Maro ny fanovana, tsy maintsy misoratra sy mivondrona eo anivon’ny FMT avokoa ny mpikatroka rehetra, torak’izany koa ny mpitantana klioba rehetra izay sady tsy maintsy manana ny mari-pahaizana mifanandrify amin’izany. Manaraka izany, tsy maintsy manana ilay “passport sportif”, ireo mpikatroka sy ny mpitantana ary ny mpikambana rehetra eo anivon’ny federasiona. Ity “passport” ity izay mirakitra ny mombamomba ilay mpikambana iray manontolo. Avy hatrany dia voatahiry sy voarakitra ao amin’ny tranonkalan’ny federasiona iraisam-pirenena avokoa izay manana ity “passport” ity, hoy hatrany ny fanazavana. Ezahina, ny hahavitan’ity fahazoana “passport” ity faran’izay haingana, hahafahana miatrika amin’ny antsakany sy andavany, ny fifaninanana “test match”, hatao ny 29 jiona izao. Ity fifaninanana ity izay hifantenana ireo hiatrika ny “Jeux Africains” ary hijerena ny lentan’ny mpikatroka malagasy, raha ny fanazavana hatrany. Mi.RazL’article Taekwondo malagasy: nisokatra amin’ny iraisam-pirenena a été récupéré chez Newsmada.
Tatitry ny Unicef: ankizy 1,6 miliara tsy afaka nianatra nandritra ny fihibohana
Araka ny tatitry ny Unicef, nahatratra 1,6 miliara ireo ankizy manerana ny firenena 191 tsy afaka namonjy sekoly noho ny fepetra raisina manoloana ny fihibohana nateraky ny valanaretina Covid-19.Fatiantoka lehibe ho an’ireo ankizy sy tanora izao fahabangana mitarazoka izao ary mila ezaka sy paikady matotra ny fanarenana indray ara-tsaina ireo ankizy vonton’ny tebitebin’aretina sy ny fitaintainana indray hiverina an-dakilasy.90%-n’ireo mpianatra manerana izao tontolo izao no tsy afaka namonjy varavaran-tsekoly hatramin’ny voalohan’ny volana avrily. Anisan’ny mahita faisana amin’izany ny ankizivavikely satria maro amin’izy ireo ny tsy afaka hiverina intsony an-dakilasy. Aleon’ny fianakavian’izy ireo manomana ireny ankizivavikely ireny amin’ny fanambadiana na koa mampiasa azy ireo mba tsy ho vesatra ao an-tokantrano.Voakasik’izany isika amin’ny firenena mahantra sy an-dalam-pandrosoana. Manome vahana ny fampanambadiana mialoha ny ankizivavy ka zara aza tapaka ny fianarana.Mizaka ny tsy eran’ny aina ireo ankizivavy amin’ireo firenena manana kolontsaina mampanambady azy ireo aloha loatra ary tsy mba afaka akory misitraka ny fampianarana na dia ny ambaratonga fototra ihany aza.Tatiana AL’article Tatitry ny Unicef: ankizy 1,6 miliara tsy afaka nianatra nandritra ny fihibohana a été récupéré chez Newsmada.
Loza an-dranomasina :: Olona efatra naratra tamin’ny faharendrehana lakana
Rendrika teny ambony ranomasina ny lakana iray, tany Soanierana Ivongo, omaly maraina. Naratra ny efatra tamin’ireo mpandeha fito niaraka taminy. Tsy nisy kosa ny namoy ny ainy. Nitondra mpandeha sy entana maromaro ity lakana tra-doza ity. Heverina fa noho ny fahavesaran’ny entana no nahatonga ny faharendrehana. Voalaza fa nidiran’ny rano tao anatin’ny lakana. Nivadika, avy eo. Nanavotra aina ny mpandeha. Nisy ny naratra nandritra izany sy teo am-piandrasana ny lakana hafa namonjy teny ambony rano. Samy tonga nanavotra sy nijery an’ireo niharam-boina ny polisy sy ny zandary. Nentina notsaboina any amin’ny hopitaliben’ i Fenoarivo Atsinanana ny sasany tamin’ireo naratra. Simba ny ankamaroan’ny entana. L’article Loza an-dranomasina :: Olona efatra naratra tamin’ny faharendrehana lakana est apparu en premier sur AoRaha.
BAD any Atsimo Andrefana: nampiova ny fari-piainan’ny olona ny fambolena sy ny lalana
66 800 km2 ny faritra Atsimo Andrefana. Manana ny mampiavaka azy manokana ny faritra, ahitana distrika sivy : Ampanihy, Ankazoabo, Benenitra, Betioky, Beroroha, Morombe, Sakaraha, Toliara I sy II. 121 kaominina, 1723 fokontany. Ifantohan’ny tetikasa maro vatsin’ny BAD vola ny faritra.Dimy taona izao ny namolavolana tetikasa maro any Atsimo Andrefana, tohanan’ny Banky afrikanina momba ny fampandrosoana (Bad). Anatin’izany tetikasa izany ny fanatsarana ny fambolena sy fiarovana ny tontolo iainana, miaraka amin’ny fanamboaran-dalana. 70 tapitrisa dolara nentin’ny Bad ho an’ny fanamboaran-dalana sy tetezana, nampiova betsaka fari-piainan’ny mponina mivelona amin’ny fambolena, ny fizahantany, ny jono sy nampandroso ny varotra.Hita nampihena ny fahantrana ho an’ny olona miasa any amin’iny faritra iny ny tetikasa. Hatramin’ny nahavitana ny lalana, ankoatra ny fihariana, nanavotra marary betsaka izany, araka ny nambaran’ireo mpitsabo sy mpampivelona any an-toerana. Lalana vita, ohatra, ny mampitohy an’i Toliara sy Analamisampy, 107 km, amin’ny RN9. Nanatsara ny fifanakalozana ara-barotra izany, nampitombo ny vokatra 15 %.Mamokatra betsaka ny faritra, kendrena noho izany ny ivoahan’ireo vokatry ny tantsaha ireo, ary ny fahavitan’ny lalana dia antoka iray ho an’ny fandriampahalemana. Noho ny Bad, nanavotra ain’olona maro sy nanatsara ny fihariana sy ny fahasalamana ny fahavitan’ny lalana. Marihina anefa fa mbola lavitrezaka ny fambolena amin’ireo tetikasa samihafa atao any an-toerana.Manampy ny vehivavyMiaraka amin’izany fanamboaran-dalana izany, namatsy vola ho fampiofanana sy fampitaovana ny vehivavy any ambanivohitra ny Bad, hahafahan’izy ireo mitantana ny fihariany sy mampitombo ny vokatra, araka izay tratra. Hita amin’ireo vehivavy ireo ny mpamboly hasy, tsaramaso, kabaro, mangahazo, katsaka. Mivondrona anaty fikambanana izy ireo, mahazo fitaovana, masomboly, sy fanafody.« Tamin’ny mbola tsy vita ny lalana, tsy afaka nitondra vokatra nivoaka izahay, ankehitriny hatramin’ny nahavita ny lalana, afaka mandeha lavitra izahay mivarotra. Ny tombontsoa azonay, ny ahafahanay miantoka ny fianaran’ny zanakay », hoy ny renim-pianakaviana iray, valo anaka. Nahavita tetikasa lehibe mifandray any Atsimo Andrefana ny Bad, nanavao ny fambolena tamin’ny fanamboarana ny tohodrano Bas Mangoky sy ny lalana RN9. R.Mathieu L’article BAD any Atsimo Andrefana: nampiova ny fari-piainan’ny olona ny fambolena sy ny lalana a été récupéré chez Newsmada.
Efa nivoaka tamin’ny fomba ofisialy ny valim-panadinana CEPE ho an’ny faritra Boeny, araka ny fampitam-baovao nataon’ny lehiben’ny fari-piadidiam-pampianarana any an-toerana. 64,83% ny taha ho an’ny faritra. Ny tany Soalala no nahazoana vokatra mendrika indrindra 67, 83% ary Marovoay no latsaka indrindra 57, 24%. Azo ambara ho tsara ny vokatra raha miohatra amin’ny ny fahatapahan’ny fampianarana tao anatin’ny fotoana maharitra.Nahatratra 1214 ny isan’ny mpiadina CEPE ho an’ny distrikan’i Betroka, tamin’ity taona ity, niparitaka tamin’ny foibe 13, ny talata lasa teo. Betsaka ireo mpiadina tsy tonga nanatrika ny fanadinana satria nalain’ny ray aman-dreny nody any ambanivolo. Tsy nanana vatsy nomena ny mpianatra ny fianakaviana ka nanala azy ireo tany an-dakilasy, hoy ny mpitantana ny fanabeazana any an-toerana. Hivaly, rahampitso, ny CEPE any an-toerana.L’article Indray mijery a été récupéré chez Newsmada.
Mbola mampanahy ary mety ho tonga amin’ny tampody fohin’ny Coronavirus. Nambaran’ny eo anivon’ny CCO, omaly, fa misy olona enina vao tonga avy amin’ny sidina avy any Eoropa, mitondra ny tsimokaretina Covid-19.“Misy olona enina vao tonga avy any Eoropa mitondra ny tsimokaretina… Tsy maintsy atao fitiliana ireo mpandeha iray fiaramanidina vao tonga. Miaraka atoka-monina avokoa izy ireo avy eo ary efa tafiditra anatin’ny paikadin’ny fanjakana izany. Mitohy ny fanaraha-maso sy ny fitsaboana azy ireo, tahaka ny efa natao amin’ireo nitondra ny Coronavirus hatramin’izay ihany”, hoy ny mpitondra tenin’ny CCO, ny Pr Vololontiana Hanta, omaly. Midika izany fa tsy voahaja ny fepetra tany amin’ny firenena niaingana, ny amin’ny tsy maintsy hanaovana fitiliana 48 ora, mialoha ny hahatongavana eto Madagasikara.Miisa 25 ny tranga vaovao any DianaHampanahy koa ny hisokafan’ny sidina Nosy Be sy ny any ivelany, ny 1 oktobra izao, sy ny hanokafana ireo serana-piaramanidina vitsivitsy eto amintsika amin’ireo firenena aty amin’ny ranomasimbe Indianina, ny 29 oktobra izao.Etsy andaniny, niakatra tampoka indray ny antontanisa navoakan’ny CCO, omaly. Miisa 63 ireo tranga vaovao amin’ny fitiliana natao miisa 598. Enina amin’izany ny avy eto Analamanga. Miisa 13 ny any Alaotra Mangoro raha telo ny any Vatovavy Fitovinany. Iray kosa ny any Boeny raha sivy ny any Diana ary miisa 25, anisan’ny maro indrindra, ireo nifindran’ny valanaretina any Sava.Mamahatra any avaratry ny Nosy ny Covid-19Mbola mamahatra any avaratry ny Nosy izany ny Coronavirus hatramin’izao. Niampy iray indray kosa ny maty ka tafakatra 226 izany izao ireo lavon’ny Covid-19 hatramin’izao. Tsy niova fa mbola miisa 20 ireo anaty fahasarotana amin’izao fotoana izao.Na izany aza anefa, miisa 61 ireo sitrana. Tafakatra 14 743 izany izao ireo nahafeno ny fepetra ho amin’ny fahasitranana amin’ireo 16 136 mitondra ny tsimikaretina Covid-19. Miisa 1 165 ireo mbola tsaboina sy arahi-maso ny fahasalamany.Miisa 68 375 ireo fitiliana PCR vita raha miisa 7 221 ny fitiliana GenExpert.Synèse R.L’article Fifindran’ny valanaretina: olona enina vao tonga avy any Eoropa mitondra ny Covid-19 a été récupéré chez Newsmada.
Basikety-FMBB: hatambatra ny fanazarantenan’ny ekipam-pirenena sy ny GNBC
Ho fiomanana amin’ny BAL (Basket afro league) sy ny “Afrobasket 2021”, nanapaka ny federasiona fa hatambatra ny fanazarantena ho an’ny ekipam-pirenena sy ny klioban’ny GNBC. Io ny isan’ny nivoitra nandritra ny fivorian’ny komity mpanatanteraka eo anivon’ny federasiona ny talata lasa teo tetsy amin’ny ANS Ampefiloha. Mbola hojerena ny fomba hanatanterahana izany satria efa niverina nanao fanazarantena ny ekipan’ny GNBC, hampifandrindrana miaraka amin’izany koa ny an’ny ekipam-pirenena. Raha ny fantatra, saika ny akamaroan’ireo mpilalaon’ny Zandarimaria no mandrafitra ny ekipam-pirenena ka moramora ny fampivondronana azy ireo, raha ny vaovao teo anivon’ny federasiona. Mahakasika ny fifaninanana eto an-toerana indray, miandry tanteraka ny fanampahan-kevitry ny fitondrana ny hanapahana ny tohin’ny fandaharam-potoana ho an’ny FMBB. Isan’izany ny fifaninanam-pirenena N1A, mbola tsy voafaritra, hatreto. Mety hiavaka ihany ny amin’ity andiany 2020 ity satria raha ho raikitra ihany izany, tsy maintsy lalao mandroso tokana ihany ary mazava ho azy fa eto Antananarivo ny hanaovana azy. Tombantombana avokoa anefa izany fa miankina amin’ny fivoaran’ny toe-draharaha ara-pahasalamana ny fandaharam-potoana rehetra.Marihina fa nanolotra baolina ho an’ny ekipan’i GNBC ny federasiona, nandritra ity fivoriana ity.Mi.Raz L’article Basikety-FMBB: hatambatra ny fanazarantenan’ny ekipam-pirenena sy ny GNBC a été récupéré chez Newsmada.
Famindrana ny fitantanana ireo CTC amin’ny Ministerany Fahasalamam-bahoaka
Nohon’ny fahaiza-mitantan’ny fitondram-panjakana dia nahitana fihenana ny isan’ireo olona mitondra ny tsimokaretina Coronavirus. Noho izany dia nakatona tamin’ny fomba ofisialy omaly 23 Septambra 2020 ny ivon-toerana fandraisana ireo mararin’ny coronavirus (Centre de Traitement Covid-19) ao Mahamasina, izay ivon-toerana farany nandray ireo marary. Ireo hopitaly lehibe arak’izany no mandray an-tànana ny fitsaboana ireo marary. Azo lazaina fa mifanaraka tsara amin’ny toe-java-misy eto Madagasikara izao fanakatonana ity ivon-toerana ity izao noho ny fahavitsian’ireo mbola mila fitsaboana. Araka ny nambaran’Andriamatoa Ministry ny Fahasalamam-bahoaka, Prof. Rakotovao Hanitrala Jean Louis dia ny fanakatonana ity ivon-toerana ity tsy midika akory hoe tapitra ny ady fa mbola mila manaraka ireo fepetra rehetra mba hitazomana izany vokatra tsara izany. Manomboka izao dia ny Ministeran’ny fahasalamam-bahoaka no handray an-tànana izay mahakasika ity valanaretina ity ary nanamafy ireo tomponandraikitra fa hanohy ny ady sy hametraka ny paikady mahomby rehetra amin’ny fifehezana ity valanaretina ity ary ahafahantsika mandresy ny coronavirus. L’article Famindrana ny fitantanana ireo CTC amin’ny Ministerany Fahasalamam-bahoaka a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.
Manomboka mamerina ny mpianatra an-tsekoly tsikelikely ireo sekoly katolika, amin’izao fotoana izao. Notanterahina, omaly, ohatra, ny fidiran’ireo mpianatra teny amin’ny sekoly Ny Sekolintsika Analamahitsy. Tsy niaraka niditra daholo anefa ireo mpianatra fa nampifandimbiasina isaky ny kilasy izy ireo. Arakaraka ny fivoaran’ny valanaretina eto amin’ny firenena no fandaminana vaovao hampiharina, hoy ireo tompon’andraikitra. Ny taona fahafito (5ème), fahavalo (4ème) ary fahasivy (3ème) no nisantatra ny taompianarana, omaly. Tsy miverina mianatra kosa, ny tolakandro. Ny taona fahafolo (première) sy ny famaranana indray no mianatra, anio, saingy tsy miverina ihany koa, ny tolakandro. Manomboka amin’ny alatsinainy 28 septambra ny garabola hatramin’ny taona fahadimy, ny tapany maraina, ary tolakandro ireo amin’ny kilasy hafa. Toy izany hatrany ny fandaharam-potoana napetraky ny sekoly. Misy fandaminana vaovao ho an’ny ambiny, amin’ny 12 oktobra 2020. Tsy maintsy manao aron-tava ny mpianatra rehetra sy ny mpanabe ary ny ray aman-dreny. Andraikitry ny talen-tsekoly Nambaran’ny sekretera jeneralin’ny Fitaleavana nasionalin’ny fanabeazana katolika (Dinec), Mompera Ranaivoson Jules fa « hapetraka amin’ireo talen-tsekoly ny fandaminana ny fampidirana ny mpianatra eny anivon’ny sekoly tsirairay. Izy ireo ihany no mahita ny isan’ny mpianatra anaty efitrano iray, hoy izy, mba hahafahana manaja ireo fepetra ara-pahasalamana ». Manafatrafatra ny zanany kosa ireo ray amandreny mba hitandrina any an-tsekoly, tahaka ny tsy fanesorana ny aron-tava, ny fanasana ny tanana amin’ny tsiranoka mamono tsimok’aretina foana (ampitondraina ny ankizy), ary ny fitondrana safako ody am-bavafo. « Matahotra mihitsy saingy tsy maintsy alefa ny ankizy. Tokony mba hozaraina efitrano roa ny mpianatra satria efa ho 60 ny isan’ny ao amin’ny kilasy. Roa isaky ny latabatra mantsy izao ry zareo. Rehefa mivory ny ray aman-dreny dia mba handroso an’izany soso-kevitra izany izahay », hoy ny renim-pianakaviana iray mampiana-janaka etsy Analamahitsy. L’article Fanabeazana katolika :: Mifandimby mankany an-tsekoly ireo mpianatra isan-dakilasy est apparu en premier sur AoRaha.
Fifidianana loholona :: Voafantina ireo kandidà avy amin’ny antoko TGV
Kandidà amin’ny fifidianana loholona avy amin’ny antoko Tanora malaGasy Vonona (TGV), naorin’ny Filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry, no nofantenana tetsy amin’ny Arena Ivandry, efa ho andro vitsivitsy izao. Fantatra fa izy ireo no handrafitra ny lisitra hisalotra ny loko volomboasary amin’io latsa-bato hatao, amin’ny 11 desambra 2020 io, araka ny antso an-tariby nifanaovana tamin’ny depiote Rakotomanga Lanto, mpikambana eo anivon’ny birao politikan’ny antoko TGV, omaly. Voalaza fa ny Filoham-pirenena kosa no hanome fankatoavana farany momba an’izany lisitra izany. « Izay no tapaka sy nifanarahan’ireo mpikambana ao anatin’ny Vovonana miara-dia amin’ny Filoha Andry Rajoelina (MAPAR), hoy izy, ary efa vita tanteraka ny lisitr’ireo kandidà roa ambin’ny folo amin’ireo faritany enina manerana an’i Madagasikara, miampy kandidà loholona mpanampy telo isaky ny faritany ». Namaly ny mason-tsivana notakian’ny antoko ireo kandidà ireo, araka ny fanampim-panazavana. L’article Fifidianana loholona :: Voafantina ireo kandidà avy amin’ny antoko TGV est apparu en premier sur AoRaha.
Fifidianana loholona : manaraka izay fanapahan-kevitra ofisialy ny Ceni
“Ho an’ny Ceni, ny rijan-teny eo an-tanana no iaingana amin’ny fanomanana hiatrehana ny fifidianana. Raha misy, ohatra, ny adihevitra, araka ny lalàna, izay tsy maintsy atao: misy ny rafitra misahana manokana amin’ny fanomezana ny heviny na ny fangatahan-kevitra momba ny lalàna mampiady hevitra.”Izay ny fanazavan’ny mpampaka-tenin’ny Ceni, Rakotondrazaka Fano, manoloana ny adihevitra hoe ara-dalàna na tsia ny fanatanterahana ny fifidianana loholona hatao ny 11 desambra. Raha milaza indray izay rafitra fakan-kevitra izay fa misy fanitsiana na tsy araka ny tokony ho izy ny fanatanterahana io fifidianana io amin’izany, manaraka izay fanapahan-kevitra ofisialy ny Ceni.Iraka ampanaovina ny Ceni ny fikarakarana ny fifidianana. Maka bahana hatrany amin’ny fiomanana amin’ny fikarakarana ny fifidianana ny fomba fijeriny sy ny fiasany. Fa tsy hoe tonga ny vanin’andro hanatanterahana ny fifidianana, nefa tsy tomombana ny fiomanana.Ahitsy sy hatsaraina hatrany lisi-pifidiananaManangona ny didy avy amin’ny Filankevi-panjakana ny amin’ireo raharaha nangatahina fandravana didy ny Ceni amin’izao, araka ny nambarany. Enti-manitsy sy manatsara ny lisitry ny mpifidy vaventy amin’io fifidianana loholona io izany. Amin’ny 11 novambra no faranana tanteraka ny lisitry ny mpifidy vaventy. Mandra-pahatonga izay, entin’ny Ceni manatsara ny lisi-pifidianana izay didy tonga eo an-tanany.Amin’ny 28 septambra izao ny fandraisana ny antontan-taratasy firotsahan-kofidina. Tsy maintsy mametraka ireo mpikambana ao amin’ny Rafitra mandray sy mpanamarina an-tsoratra ny antontan-taratasy ny firotsahan-kofidina (Ovec) eny anivon’ny fari-pifidianana, ny renivohi-paritany enina, ny Ceni. Mialoha ny 28 septambra, tsy maintsy mahazo fiofanana avy amin’ny Ceni foibe ireo mpikambana amin’izany.R.Nd. L’article Fifidianana loholona : manaraka izay fanapahan-kevitra ofisialy ny Ceni a été récupéré chez Newsmada.
Betsaka ireo mararin’ny Covid-19 efa sitrana no niverenany indray, araka ny nambaran’ireo mpitsabo. Misy tamin’izy ireo no narary nanana fahasarotana saingy rehefa niverenany dia tsy nananosarotra intsony ny aretina noho ny fananany hery fiarovana. Maivana kokoa ny soritr’ aretina fa maharitra vao sitrana indray, araka ny fanamafisan’ireo mpitsabo. L’article Valanaretina Covid-19 est apparu en premier sur AoRaha.